Ny rantsan-tanan'i Iris Scott ihany no ampiasaina handokoana ny sanganasany | Famoronana an-tserasera
Raha mampiasa borosy handokoana isika dia satria ahoana no mety hahatonga ny tendrony marefo amin'ity fitaovana tena marina ity izay mamela antsika hanao ireo tsipika tonga lafatra indrindra amin'ny tanana izay manana pulsa hanao azy amin'ny fomba nampiakarina.
Fa ny toerana itondran'i Iris Scott antsika sary hosodoko dia talohan'ny teknika taloha ampiasao toy ny borosy ny tendron'ny rantsan-tànanao na fitaovana handokoana azy ireo. Ilay mpanakanto mihitsy no maneho hevitra fa tsy misy na inona na inona eo amin'ny rantsan-tànany sy ny lamba, toa azy rehefa mampiasa saribao, pensilihazo na borosy iray isika.
Voalaza hatrany koa fa ny mihinana amin'ny tananao dia midika izany manana tsiro bebe kokoa ny sakafo. Tsy maintsy herin'ny tananay io ka nanapa-kevitra i Scott fa hanandrana ny vintan'ireo sary hosodoko tena mahavariana ireo.
Mandray anjara mavitrika amin'ny hetsika kanto antsoina hoe ny mpanakanto "Instinctualism", izay mampiseho loko marevaka, lohahevitra sy firafitra tena miabo izay manome antoka fa afaka mifaly amin'izy ireo ny mpijery.
Nasehon'i Iris ihany koa fa amin'ny sary hosodoko dia tiany izy roa ireo fialan-tsasatra amin'ny fiainantsika mahazatra ho fanamafisana ny fantatra. Ny mpandoko matetika dia mampiasa loko miorina amin'ny menaka maherin'ny 100 handrafetana seho tokana. Naniry mafy ny hampiseho ny mety ho miafina amin'ny rantsantanana i Scott izay mety ho lasa fitaovana manokana hamoronana tontolo iray izay heverin'ny mpijery ho anisan'izany.
Scott dia manana boky manokana izay ampianariny ampahany amin'ny fahendreny momba an'io endrika kanto io fa tsy mampiasa borosy izy, fa ny tendron'ny rantsan-tànany kosa no ampiasainy hamoronana sangan'asa avo lenta izay manintona ny sain'ny olona noho ny fikasan'izy ireo, izay mampatsiahy ireo mpanao hosodoko frantsay mahazatra. Asa tena velona sy miloko.
Raha mankany amin'ny iray amin'ireo isika manam-pahaizana momba ny impressionism ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Tsy manao hosodoko afa-tsy amin'ny rantsan-tanan'i Iris Scott
Tatiana silveira dia hoy izy:
Asa tena tsara. Mampiorina ny fitaoman'ny fifohazana um olhar ho an'ny sary hosodoko, ho an'ny famoronana. Hafatra mavitrika, mifohaza, mahazo aina na manimbolo.
Valiny tamin'i Tatiana Silveira